Iincwadi esizikhethayo? Bona ukufunda. _Cyrano de Bergerac_, _The Phantom ye-Opera_ kunye _Los miserable_ | Uncwadi lwangoku
Bona ukufunda. Masijongane nayo, ndiyenza: ngezinye iincwadi asikwazi. Kude, "kutyebile", kunzima ukulandela ... Okanye ngokulula, kwaye kunjalo injalo kwelona laziest, ngubani ziinguqulelo zabo zefilimu. Iinguqu ezishwankathela okanye zilungelelanise loo mibhalo yoqobo kwaye ziyenze ikhaphukhaphu okanye icoleke ngakumbi. Okanye nangona sizifundile, kufuneka siyivume loo nto sikhetha "ukuzibona".
Ihlala isenzeka kuthi ngakumbi nge Imisebenzi emikhulu Ababhali ababalaseleyo kwimbali. Nokuba ezi nguqulelo ziphantsi kakhulu kunesalathiso soncwadi. Ngaphezu, kwezinye kukho ezininzi onokukhetha kuzo. Namhlanje Ndithetha ngezinto ezintathu zakudala zesiFrentshi. Umntu ngamnye makazenzele eyakhe.
1 UCyrano de Bergerac - uEdmond Rostand
2 Iphantom ye-Opera - uGaston Leroux
3 I-Les Misérables- UVictor Hugo
4 Ngapha koko
Cyrano de Bergerac -U-Edmond Rostand
Umntu ubona igama elithi Cyrano kwaye elilandelayo bubuso (kunye nempumlo) ye UGérard Depardieu. Okanye mhlawumbi indala kule ndawo bayibonayo UJose Ferrer. Okanye mhlawumbi ukuya UJose Maria Flotats, owayedlala ngokujikeleza la malungu. Kodwa phakamisa isandla sakho ngubani ofundileyo iivesi zaseAlexander dlala ukuba French neo-zothando wabhala UEdmond Rostand kwaye yaqala yenziwa 1897.
Ngamafutshane, kukho ubuso obungenakubalwa kwi-cinema okanye kwindawo yemidlalo yeqonga ngalo lonke ixesha, kodwa ezo zeDepardieu kunye neFerrer zezona sizikhumbula kakhulu. Ikwayimpumelelo kakhulu. Bobabini abadlali batyunjelwa u-Oscar (uFerrer wayiphumelela) ngokumbuyisela ebomini UHercule-Savinien nguCyrano de Bergerac, Ijoni lenkulungwane yeshumi elinesibhozo, imbongi kunye nembekiselo yothando ngokugqwesa awayenako.
Sonke sizibonile ezinye zeenguqulelo zayo. Ukusuka kuloo kaFerrer ngo-1950 ukuya kwelaseDepardieu ngo-1990, ngakumbi eyokugqibela, ethi, ukuba yenziwe ngokumamela ngesiFrentshi, iphumelele. Ngokunyaniseka, andikayifundi.
Iphantom yeOpera -Gaston Leroux
I-phaaaantom ye-opera ilapha… ngaphakathi kwengqondo yam…
Kuba yile nto canto xa ndijonga ezo leta. Andinamatheli nakwezinye iinguqulelo zakhe zefilimu, kodwa nge umculo. Esi sihloko kunye nesihloko esilandelayo sithathwa njengeyona ilungileyo kwimbali. Kwaye ukuba abasebenzi babuzwa malunga nombhali womsebenzi woncwadi, ngokuqinisekileyo abaninzi banike igama lika UAndrew Lloyd Webber.
Umqambi weNgesi odumileyo ubile isiza kumdali waso oyinyani, Intatheli yaseFrance kunye nombhali uGaston Leroux. Uhlobo oluphambili lombhali uloyiko lwe-gothic kunye nemfihlakalo, ULeroux wapapasha isihloko sakhe esidumileyo kwi 1910. Kodwa lowo wamphakamisela eluzukweni olungunaphakade wayenguWebber kunye nenkululeko yomculo ongalibalekiyo.
Kukho ubuso obungenakubalwa kunye namazwi athi iimvumi ezinkulu ezivela kwihlabathi liphela zibeke kuyo, ukusuka kwiintsomi UMichael Crawford kude kube kukhulu UGeronimo Rauch Kwinguqulelo yayo yeSpanish nakwi Londres. Phakamisa izandla zakho otyelele ikomkhulu lase-Bhritane kwaye khange uyibone le powusta kwi-facade ye Ithiyetha yobuKhulu bakhe kwisitalato iHaymarket. Inxalenye yentliziyo yam yomculo yahlala apho izihlandlo ezithathu.
Ewe kunjalo, ndiza kugxininisa Inguqulelo yefilimu de 1943 nomnye wabadlali bam endibathandayo, Imvula kaClaude . Ngaphambi kokuba kubekho leyo ILon Chaney Sr. Kwaye eyokugqibela eneenkwenkwezi UGerald umngcamli ngo-2004. Kwaye ... nam andikayifundi.
Iimbandezelo - UVictor Hugo
Uyamva na ukuba abantu bayacula?
Uthini? Le yenye yezona zininzi Iinoveli ezibalulekileyo zalo lonke ixesha. Kodwa phakamisa isandla sakho ukuba ngubani oyifunde YONKE. Khange ndikwazi kwaye ngeli xesha ndizamile. Kulula ngokulula, kwaye ngaphandle kwamanqwanqwa ombhali ongumFrentshi, i umculo ophakamileyo UClaude-Michel Schönberg kunye no-Alain Boublil Umsebenzi wokubhala utyiwe.
La Imbali yokungafi webanjwa UJean valjean, owayemsukela engayeki Javert, encinci ICosette kunye nelishwa Ubumnandi sele ifakwe namanye amazwi kunye nomculo ngokungafi. Ukuba umntu akakawuboni umculo okwangoku, mabazame konke okusemandleni ukwenza njalo, okanye ke bamamele
Zininzi nezinye iimvumi ababolekise ngelizwi. Ukusuka kwezona zembali UColm Wilkinson kude kube yeyokugqibela kwaye ibonakale kakhulu Hugh Jackman. Kwaye ngeSpanish, kwakhona iArgentina Ukuphinda. Ndiyathembisa ukuba ndiza kufunda ngaphezulu kwesiqingatha. Kodwa ngenye imini andizange ndiphinde ndiyithathe. Kwaye iyaqhubeka.
Yintoni izihloko ezingaphezulu unayo? Yiza, yenza olo luhlu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi esizikhethayo? Bona ukufunda. _Cyrano de Bergerac_, _The Phantom ye-Opera_ kunye _Les miserable_
Iikhosi zoncwadi kwihotele Kafka